Xildhibaan Sunni: Madaxweyne Xaaf hala heshiiyo Dadka Reer Galmudug – Kalfadhi
Xildhibaan Muxiyadiin Sh. Cabdullaahi Cusmaan (Sunni), oo ka tirsan Golaha Wakiillada Galmudug, ayaa u sheegay Kalfadhi in ay Madaxweynaha Galmudug, Axmed Ducaalle Geelle (Xaaf) la gudboon tahay inuu ka shaqeeyo inuu xaliyo khilaafka Galmudug ee uu qeybta ka yahay. “Madaxweynuhu idaacadaha warka laga deynayo, cabashooyinka iyo waxbaa duulay inta iska daayo, dadka Reer Galmudug ha u tago, hala tashado, ha hishiyaan, waxay isku og yihiinna wax haku qabsadaan” ayuu yiri Xildhibaan Sunni.
Waxa uu sheegay in haddii ay Reer Galmudug midoobaan aysan jireen faragelin lagu sameyn karo. “Waxay ku qasban yihiin” buu yiri “in ay masaalixdooda ka fekeraan oo, si ay sidaas u gaaraanna, ay tahay in ay heshiiyaan”. Xildhibaanka yaa sheegay in haddii ay Galmudug ku fashilanto in ay is xaliso ay u nuglaan doonto halisa fara badan. “Haddii ay is xalin waayaan dadka Reer Galmudud, hadde wax kasta oo ku yimaada waa in ay u dulqaataan” ayuu yiri Xildhibaan Sunni.
Xildhibaanku waxa uu intaas raaciyey in, haddii aan la siyaasadeyneen, aysan Ciidan shalay la geeyey Cadaado iyo Caabud-waaq halis ku ahayn Dowlad Goboleedka Galmudug, kuwaas oo ay ka digtay Xukuumadda Galmudug. “Haddii Madaxtooyadii ay Maleeshiya Beeleed joogeen, oo Dowladda Federaalka ciidankeedii uu tagay, anigu ma qabo wax dhib ah in ay tahay” ayuu yiri Xildhibaan Sunni.
Xildhibaanku waxa uu ka meer-meeray inuu abaaro fasiraadaha ay yeelan karto in Madaxtooyada Galmudug aysan wax ka ogeen ciidanka la wareegay amaankeeda, oo markii ay tageen Madaxtooyadana ay Xukuumadda Galmudug qaadacday. “Madaxtooyada Galmudug, Magaala Madaxda Galmudug waa Dhuusamareeb, halkaasaana Madaxweynuhu waayahan ku shaqeynayey oo uu joogay” ayuu yiri Sunni.
Hadalkiisa Xildhibaan Muxyadiin Sunni waxa uu imaanayaa iyada oo ay Galmudug cambaareysay, ineysan waxba ka ogeenna ay sheegtay ciidan ay Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) maalin ka hor geysay Cadaado iyo Caabud-waaq, kuwaas oo meelaha ay la wareegeen ay qeyb ka tahay Madaxtooyadii Galmudug ee Cadaado. Galmudug waxay sheegtay in ay tilaabadaas u horseedi karto shacabka gobolkaas colaad sokeeye.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo Dowladaha Carabta ka codsaday in dalkiisa laga taageero la dagaalanka Al-Shabaab